Fitondrana… mamono afo | NewsMada
Fitakiana etsy, fitokonana eroa… Mitaky ny fanajana ny hasina sy ny fahaleovantenan’ny fitsarana, ohatra, ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM). Eo koa ny an’ny Sendikàn’ny mpirakidraharaha fitsarana (SGM), mitaky ny fanajana ny fanondrotana grady, tambin-jo… andrasam-bokatra afaka 15 andro.
Miandry hatramin’ny 26 jona ny an’ny Sendikàn’ny mpiasan’ny ladoany (Sempidou). Eo ny an’ny Sendikàn’ny tantsambo eto Madagasikara (Sygma). Mety mbola ho vary mangatsiaka ny fitakian’ny Sendikàn’ny mpampianatra mpikaroka eny amin’ny fampianarana ambony (Seces), na lazaina ho efa nilamina aza.
Amin’izany rehetra izany, tsy mahita vahaolana mahomby sady maharitra ny fitondram-panjakana. Famonoana afo no atao vonjy tavanandro: marimaritra iraisana. Efa karazan’ny manampintampina ny lavadavaka etsy sy eroa amin’ny sambo efa ho rendrika? Misababaka eo… Hanao ahoana no hiafarany?
Inona moa ity hoe mamono afo? Ezahina vonoina ny afo tsy hisy intsony, na ho faty fotsiny izao. Mba tsy hisy intsony ny karazana fitakiana sy hetsika amin’izao… Mamono afo koa ny famonosana izany amina karazana fampanantenana, ampitso ampitso lava; eny, na lainga sy fitaka aza.
Tsy mahagaga raha tsy misy inona vita. Nefa mandra-pahoviana no ahavitana mamono afo lava? Na vonoina io, na fonosina… Mety vao mainka handrehitra afo ny famonoana botretra lava, ary mety handoro tena ny famonosana afo… Ny marina toy ny afo: raha fonosina, mandoro.
Izany izao mitranga sy iainana izao? Na may ny afo natsangany ny fitondrana amin’ny fampanantenana vola avy atsy na aroa… Eo koa ny tsy firaharahana ny olan’ny hafa, fa ny an’ny tena ihany: fahamarinan-toerana amin’ny fomba rehetra, ohatra. Manginy fotsiny ny olan’ny vahoaka.
Vao sendikà aza no mihetsika, vao mainka fa ny vahoaka amin’ireo olana isan’andro vaky: tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, fandrobana tany, fanamparam-pahefana… Famonoan-tena ny famonoana afo lava? Misy farany ny atao na ho ela na ho haingana…